Ampahany OBC Q1- Charger AC220V& DC12-120V
CCS2 mankany GB/T adaptatera
Fametrahana basy famolavolana fenitra, inona no maha samy hafa ny American fenitra, Eoropeana fenitra sy ny fenitra nasionaly fiampangana basy？
Fenitry ny famolavolana basy, inona no maha samy hafa ny fenitra amerikana, ny fenitra Eoropeana ary ny basy fanamafisam-peo nasionaly? Raha ny "standard nasionaly" (GB/T), dia any Shina ihany no ampiasaina ary manana fetra ara-jeografika.Eo amin’ny lafiny teknika, ny « national...
Fametrahana basy famolavolana fenitra, inona no maha samy hafa ny Amerikana fenitra, Eoropeana fenitra sy ny fenitra nasionaly fiampangana basy? Amin'izao fotoana izao, ny maneran-famandrihana fenitra dia amin'ny ankapobeny mizara ho telo sokajy mifototra amin'ny interface tsara: ny iray dia ny Amerikana fenitra, ny iray hafa dia ny Europea. ...
Mitondra anao hahatakatra ny famandrihana EV USA
Mety efa naheno momba ny fanahiana amin'ny faritra maro ianao, manahy fa tsy hitondra anao any amin'izay tianao haleha ny EV-nao.Tsy olana ho an'ny fiara elektrônika hybrid (PHEV) plug-in izany – mandehana any amin'ny tobin-tsolika fotsiny ianao dia afaka mandeha.Ho an'ny fiara mandeha amin'ny bateria (BEV), mitovy ...
Maneran-tany ve ny fandoavana fiara elektrônika?
Araka ny fanadihadiana, ny 70%-n'ny mpiserasera dia mino fa ny mpanome fiara mandeha amin'ny herinaratra dia manerana izao rehetra izao, raha ny 30%-n'ny mpiserasera kosa mihevitra fa tsy eran'izao tontolo izao ny famandrihana fiara mandeha amin'ny herinaratra.Noho izany dia mety ho an'ny rehetra ve ny fandoavana fiara elektrika?Raha ny marina, ny famandrihana fiara elektrika dia ara-teorika tsy manerana izao rehetra izao.Ity ny s...
Ohatrinona no fantatrao momba ny charger fiara?
Ny OBC dia ampiasaina amin'ny fiara elektrika madio (BEVs), fiara elektrika hybrid plug-in (PHEVs) ary fiara selan-tsolika (FCEVs).Ireo fiara elektrika telo (EV) ireo dia antsoina hoe fiara vaovao angovo (NEVs).Ny on-board chargers (OBCs) dia manome ny asa manan-danja amin'ny famandrihana ...
Ahoana ny fisafidianana charger tsara?
Miaraka amin'ny fitomboan'ny varotra fiara mandeha amin'ny herinaratra, ny charger, iray amin'ireo kojakoja manan-danja amin'ny famandrihana fiara, dia "nokarakaraina" ihany koa.Na izany aza, ny tokonam-baravarana fidirana ho an'ny charger dia avo dia avo, ary maro ny fepetra ara-teknika sy fahasahiranana no tena mankarary loha amin'ny dingana ...
Ny lafin-javatra tokony hodinihina rehefa mividy fiara optima charger bateria
Ora famandrihana.Ny salan'isan'ny fotoana famandrihana ho an'ny charger bateria fiara dia hiovaova arakaraka ny charger sy ny bateria fiara.Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny charger dia maharitra adiny roa ka hatramin'ny folo eo anelanelan'ny fiampangana feno.Ny charger kely sy azo entina dia mazàna maharitra ela kokoa, ary raha tianao ny fotoana famandrihana haingana indrindra, ny g...
Nahoana no mividy charger bateria fiara
Fadio ny misolo toerana.Ny fanoloana bateria asidra firaka dia tsy raharaha sarotra, fa miankina amin'ny karazana fiara anananao dia mety ho sarotra ny fanoloana bateria asidra firaka.Amin'ny fiara sasany, ny fanovana ny bateria dia asa tsotra: tapaho ny clip, esory ny ramanavy taloha...
Tandremo amin'ny famandrihana fiara mandeha amin'ny herinaratra amin'ny andro orana
nataon'ny admin tamin'ny 22-05-21
Miaraka amin'ny laza haingana amin'ny fiara elektrika, mihamaro ny mpanjifa mividy sy mampiasa fiara elektrika.Na izany aza, ny fomba famandrihana fiara elektrika amin'ny andro orana no azo antoka indrindra.Mino aho fa olana iray tena mampanahy ny tompona fiara io.Inona àry no tokony hotandremana rehefa...
Fantatrao ve ny fomba fiasan'ny charger?
Miaraka amin'ny fanentanana momba ny fitsitsiana angovo sy ny fampihenana ny etona ary ny fampivoarana ny indostrian'ny angovo vaovao.Afaka mahita trams vaovao maro sy mpanome tolotra tena ilaina isika manodidina antsika.Fa fantatrao ve ny fomba fiasan'ny charger? Mampiasa mode DC na CC/CV ny charger amin'ny ankapobeny ...
Vahaolana famandrihana fiara elektrika
Miorina amin'ny fanohanan'ny politikam-pirenena sy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao any amin'ny firenena samihafa, dia nitombo haingana ny indostrian'ny fiara elektrika vaovao.Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsenan'ny fiara elektrônika, DCNE, amin'ny maha orinasa manana teknolojia miaramila 25 taona...
Ambaratonga tsy manam-paharoa amin'ny kalitao sy serivisy, Manome serivisy matihanina matihanina izahay ho an'ny vondrona sy ny tsirairay.
© Copyright - 2010-2022 : Zo rehetra voatokana., , , , , , ,
Building 2, Fizarana 1 Huafu Avenue, Tianfu New Direct, Chengdu 610000, Sina.